Blog Reader: [See And Be Seen]2New Entries: ဘာသာပြန်ရခက်သော စကားလုံးများ
[See And Be Seen]2New Entries: ဘာသာပြန်ရခက်သော စကားလုံးများ
အခုတလော အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ ချာလပတ်လည်ရမ်းနေရတဲ့ အထဲ ဘာသာပြန်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို တာဝန်ယူမိတယ်။ အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မြန်မာမိန်းကလေးအကူခေါ်ထားလို့ပါ။ ဘာသာပြန်ရင်း၊ စကားပြောရင်း အခုတော့ သူငယ်ချင်းကိုတောင် သိပ်မခင်ချင်တော့သလိုလို။ ဪ... ပြောရတော့လဲ့ ခက်သား။
သူမနာမည်က "ခိုင်"တဲ့။ သူတို့ အလုပ်လျှောက်တဲ့ Agent ကလည်း ဒီမှာရှိတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး။ ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီးထဲက ဒီတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးသမီးက ရွေးလာရော။ ရောက်လာပြီး နောက်နေ့ကစလို့ ကိုယ်လဲဘာသာပြန်ဆရာ ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
အစကတော့ ပြောသမျှ နားလည်တာကို ပြန်ဖြေတာ အဆင်မပြေတာလို့ ထင်လိုက်တာ။ နောက်ပိုင်းမှ ပြဿနာက သူတို့နှစ်ယောက် အဆင်မပြေတာက စကားကို နဲနဲပဲ နားလည်တာကို ပြန်မမေးရဲတာဆိုတာ သေချာသွားတာ။ အစအဆုံး အိမ်ရှင်း၊ ဟင်းချက်၊ ထမင်းချက်ပုံအားလုံး ဘာသာပြန်ပေးပေမယ့် စင်းလုံးချော မဖြစ်။ သူ့ခမျာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းစင်္ကာပူမနဲ့ ပြောရင် ဗမာ စကားတွေထွက်၊ ကိုယ်နဲ့ ပြောတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုတွေပြော ရှုပ်ယှက်ခတ်ကုန်တော့တာပါပဲ။
ဧည့်သည်လာလို့ Drink တစ်ခုခုယူလာပေးပါဆိုရင် ရေခပ်လာတာမျိုး၊ နေမကောင်းလို့ ဆန်ပြုတ် ပြုတ်ခိုင်းလိုက်တာ Porriage လို့ပြောတော့ ၀က်သားဟင်း ချက်လိုက်တာမျိုး။ ကော်ဖီဖျော်တာ ခါးနေလို့ သကြားနဲနဲ ထည့်ပေးပါဆိုတာ အားလုံးယူပြီး သွန်ပစ်လိုက်တာမျိုး။ အိမ်ရှင်ရဲ့အဖေ (အဘိုးကြီး) လာလည်တာ Look after လို့ပြောထားလိုက်တာ ရှေ့တည့်တည့်က သွားထိုင်နေတာမျိုး။ နေ့တိုင်း သူက တစ်ခုခု တလွဲလုပ်လိုက်၊ အိမ်ရှင်သူငယ်ချင်းမက Help Me Pls ဆိုပြီး သူ့ဖုန်း ကိုယ့်ဆီလာထိုးပေးလိုက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း "ခိုင်" ကနေသားကျလာသလားတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အိမ်ရှင်မနဲ့ တူလာသလိုပဲ။
တခါတလေကျတော့လည်း "ခိုင်" ကသူ့အမေကိုလွမ်းလို့ငို။ အိမ်ရှင်က သူ့အိမ်မှာ အလကားနေရင်း မျက်ရည်ကျတာ မကြိုက်၊ အယူသီး။ ဒါနဲ့ ဘာလို့ ငိုသလဲမေးတော့ "I remember, I remember" လို့ အကျယ်ကြီး အော်ဖြေသတဲ့။ ဒါနဲ့ အိမ်ရှင် က "What do you remember?" လို့မေးတဲ့အခါ "I remember is I remember" ဆိုပြီး ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုလေရော။ သတိရတာကို သတိရ၊ ရ မလားမေးတယ်လို့ထင်ပြီး ပိုဝမ်းနည်းတယ်ထင်ရဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ အိမ်ရှင်လုပ်တဲ့သူက ကိုယ့်ကို ဖုန်းဆက်၊ သူမက အိမ်မှာ ငိုနေတော့ လန့်လာသတဲ့။ ရေခြားမြေခြားမှာ အလုပ်လာလုပ်ရသူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို သူတို့က နားမလည်၊ သူနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးလို့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေမယ့် သူ့တို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုရဲ့ အဖြေက ငိုနေရမှာ မဟုတ်ဘူးလေတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ "ခိုင်" ကို မငိုပါနဲ့၊ အားလုံးက ဒီလိုပါပဲ ဆိုတော့ သူက ပြောလေ၊ ငိုလေ။ အိမ်ရှင်က Agent ကို ဖုန်းဆက်ပြောတော့ "အဆင်မပြေ ပြန်ပို့ရုံပဲ။ ကျွန်မတို့က နာမည်ပျက်မခံဘူး" တဲ့။ စင်္ကာပူ အိမ်ရှင်မကတောင် အံ့သြလို့။ ဒီလောက်ပြတ်သားရလားတဲ့။ ကိုယ့်ကိုလဲ Agent က ပြန်ပို့လိမ့်မယ်ဆိုတာ ပြောပေးပါတဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ငိုနေတဲ့ လူကို မပြောချင်တာနဲ့ Agent တွေက အိမ်ရှင်စိတ်ညစ်ရင် နောက်တစ်အိမ်ပို့လိမ့်မယ်။ အဲဒီကျရင် အားလုံး အစကနေ ပြန်စရမှာ အိမ်ရှင်မှာ မြန်မာသူငယ်ချင်း မရှိရင် ပိုဆိုးလိမ့်မယ်။ သည်းခံပါလို့ ဘာသာပြန်ရတယ်။ ဪ...လူပင်ပန်းတာထက် စိတ်ပင်ပန်းတာ ပိုနေရခက်ပါတယ်လေ။
တကယ်တော့ ဒီအလုပ်မျိုးလာလုပ်ရတဲ့ သူတွေ တော်တော်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ တစ်လ $၁၀ နဲ့ ရှစ်လ တိတိ အလုပ်ပြီးမှ တစ်လကို $၃၂၀ ရမှာပါ။ စားပြီး သောက်ပြီး တစ်လကို ၃၂၀ ကျန်တာမှန်ပေမယ့် ဘွဲ့ရမိန်းကလေးတွေအတွက် လုပ်ဖူးနေကျ မဟုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းသဘာဝမို့ စိတ်ပင်ပန်းမှုက နှိုင်းစရာရှိမယ်မထင်။
ကိုယ်တို့တွေ ရန်ကုန်မှာလဲ ကွန်ပျူတာ၊ ဒီမှာလည်း ကွန်ပျူတာရတာခြင်းအတူတူတောင် ခံစားချက်က တခြားစီ။ ABCD အတူတူခြင်းတောင် ဒီမှာရေးရတဲ့ ABCD ကမွန်းကျပ်မှုအပြည့်။ သူတို့လို တနေကုန် ဒီအိမ်ထဲမှာ မိုးလင်းက မိုးချုပ် အလုပ်ခွင်ဖြစ်နေရတာ တော်တော် မလွယ်တဲ့ဘ၀ပါ။ ကိုယ်တွေ့ဘူးတဲ့ မြန်မာအိမ်တွေကလည်း အကူခေါ်ရင် အင်ဒိုနီးရှားမတွေ၊ ဖိလစ်ပိုင်မတွေချည်းပဲ။ စကားအားလုံးနားလည်နေတော့ စကားရှုပ်လို့တဲ့။ မြန်မာအချင်းချင်း မခေါ်ချင်ကြဘူးတဲ့။ ကိုယ်လဲ မကြားဘူးတာတွေ ကြားရ၊ သက်ပြင်းပဲ ခဏခဏ ချမိပါတော့တယ်။
တရက်ကျတော့ အိမ်ရှင်ခရယာန်က "ခိုင်" rule ကို ဖောက်ဖျက်တယ်။ အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ် အဆင်မပြေဘူး ဆိုပြီး ပြဿနာယူလာပြန်ရော။ သူ့အိမ်မှာ ဘုရားရှိခိုးလို့တဲ့လေ။ သူတို့ရဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ ဘာသာ မတူရင် ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူးလုိ့ ပါတယ်ဆိုပဲ။ ကိုယ်လဲ တော်တော် စိတ်တိုသွားမိတယ်။ ဘာလို့ မရတာလဲ မေးတော့ သူ့အိမ်မှာ God နှစ်ယောက် ဘယ်လိုနေမလဲတဲ့။ သူ့ God က စိတ်ညစ်နေမှာပေါ့တဲ့။ နင် ဓါးအိမ်ထဲကို ဓါးနှစ်ချောင်းထည့်လို့ ရလို့လားတဲ့။ သူ့ဓါးနဲ့ သူ့ဓါးအိမ်နဲ့ပဲ အဆင်ပြေသလို သူတို့ရဲ့ ခရစ်ယာန် God ကလဲ သူ့အိမ်မှာ အဆင်ပြေပြေလေးနေတာ တခြားဘာသာက God ရောက်လာလို့ မရဘူး ဘာညာနဲ့ စိတ်တွေဆိုးပြီး လုံးဝဘုရားမရှိခိုးပါနဲ့လို့ ပြောပေးပါတဲ့။ ဖုန်းကို အတင်းထိုးပေးပြန်ရော။
ကိုယ်လည်း ခဏနေပါဦးဆိုပြီး သူ့ကို မေးရတယ်။ နင်တို့ စင်္ကာပူကျွန်းမှာ ခရစ်ယာန်တွေပဲ ရှိတာလား။ တခြားဘာသာဝင်တွေ အများကြီးရှိတယ် မဟုတ်လား။ နင်ပြောသလို God တွေသာ စိတ်ညစ်ရမယ်ဆိုရင် နင်တို့ ကျွန်းရေမြုပ်သွားတာ ကြာလှရောပေါ့လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ တော့ God ပျော်နေတယ်။ ဒီနေ့ တော့ God စိတ်ညစ်နေတယ်။ ဒီနေ့တော့ God ဘာလုပ်လုပ် Feel မလာဘူးဆိုတာရှိလားလို့ ပြန်မေးရတယ်။ သေချာစဉ်းစားပါဦး။ နေရာ သေးသေးလေးတစ်ခုမှာ God နှစ်မျိုးရှိနေတာ ပိုအေးချမ်းစေမှာ မဟုတ်လား ဆိုတော့ ပြန်မဖြေဘူး။ အကြာကြီးနေမှ သူ့ God ကို သူက မြင်ဘူးတယ်တဲ့။ God က သူစိတ်ညစ်ရင် အိပ်မက်ပေးတယ်တဲ့။ ကိုယ့်မှာလဲ ခရစ်ယာန် အပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးပါ။ သူ့လို မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပြောပြော သူ့ God စိတ်ညစ်နေပြီ။ နင် မပြောပေးရင် ငါ ပြန်လွှတ်လိုက်တော့မယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်က အဲဒါဆိုလည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပဲ ခေါ်ပါလား။ ဘာလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်တာလဲ ဆိုတော့ မဖြေဘူး။ မရဘူးဆိုတာပဲ ကြောက်အားလန့်အား ပြောနေတော့တာပဲ။ Please Please ဆိုပြီး ဒီဘုရားစာ ရွတ်လို့မရ၊ ဘုရားရှိခိုးလို့ မရဘူးဆိုတာ သေသေချာချာ ဘာသာပြန်ပေးပါ ဆိုပြီး ဇွတ်ပြောတော့တာပါပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ "ညီမရေ... ဘယ်အချိန်ဘုရားရှိခိုးလဲ" လို့ မေးတော့ ညအိပ်ရာဝင်၊ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အကုန်ရွတ်တယ်တဲ့။ အလွတ်ရလားဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ တဲ့။ ဒါဆိုရင် တနေကုန် အလုပ်လုပ်ရင်း ရွတ်နေပါလား။ ဘုရားဆိုတာ တစ်နေ့တစ်ခါ ဖင်ထောင်အောင် ရှိခိုးမှ ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ပုံတော်ကို ထိုင်ကန်တော့နေရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဂုဏ်တော်ကို ရင်ထဲက ပူဇော်ရတာမျိူး။ တစ်နေကုန် မနက် အိပ်ယာနိုးကတည်းက အိမ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ဂုဏ်တော်လေးတွေ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေပေါ့။ ညဘက် လူတွေ အားလုံးပြန်ရောက်လာမှ မရှိခိုးနဲ့ပေ့ါ။ သူတို့က ခရစ်ယာန်တွေ ဆိုတော့ အမြင်တစ်မျိုးလေ။ သူတို့လဲ အပြစ်ဖြစ်တာပေါ့ လို့ ဘုရားမရှိခိုးရဘူးဆိုတာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာ လေကြောတော့ ရှည်သွားတာပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော အဆင်ပြေဘို့က အရေးကြီးနေတယ်မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ ကိုယ့်မြန်မာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တရုတ်၊ ကုလားရဲ့ အိမ်မှာ ဖိနပ်စင် အမြဲ ဖုန်ခါ၊ သူတို့စားပြီးမှစား၊ အိမ်သာပြောင်အောင်ဆေး ဆိုတာတွေ ဘာသာပြန်ရတာကို တော်တော် "ခါး" နေပါပြီ။ မပြောချင်လို့လဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မြန်မာတစ်ယောက်တည်း ရှိတာမို့ ရှောင်ပြေးလို့မရ။ သူတို့ နိုင်ငံခြားသားတွေက အိမ်အကူဆိုတာ မီးဖိုချောင်နှင့် တကွ တအိမ်လုံးကို စီမံကွပ်ကဲနိုင်သူလို့ သတ်မှတ်တာပါ။ ရောက်လာတာနဲ့ မီးဖိုထဲက နံရံကပ် ဗီဒိုကို စစ်ပြီးသား။ ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်ပြီး ဘာ အသားငါးတွေ ရှိလဲ စစ်ပြီးသား။ ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းချိန်တွေ၊ ကျူရှင်ချိန်တွေမေး၊ သူတို့စားတတ်တဲ့ မနက်စာတွေ ဟင်းတွေမေး၊ ဒါမျိုးကိုလိုချင်တာတဲ့။ ကိုယ်တို့လူမျိုးက သူများအိမ်မှာ ဟိုပစ္စည်းလှန်ကြည့်၊ ဒီဗီဒိုဖွင့်ကြည့်၊ စပ်စပ်စုစု လျှောက်ကြည့်ဘို့ အလွန်ဝန်လေးတဲ့ လူမျိုးပါ။ ရောက်ရောက်ခြင်း ရေခဲသေတ္တာဖွင့် စစ်ဘို့နေနေသာသာ အိမ်ရှင်လိုက်ပြလို့ကြည့်ရရင်တောင် အထဲက ပစ္စည်းကိုင်ကြည့်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကလေးတွေကို ကျောင်းချိန်အမှီ နှိုပေးရတာတွေ၊ မနက်စာပြင်ပေးပြီး ကျူရှင်ချိန်ဆိုလည်း သတိပေးရတာတွေ ရောက်ရောက်ခြင်း ဘယ်တတ်ပါ့မလဲ။ တစ်နေကုန် အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ အမေတွေက အိမ်အကူအပေါ်မှာ အများကြီး အားကိုးနေရတဲ့ ဘ၀တွေ သူတို့ ဘယ်နားလည်ဦးပါ့မလဲ။ အမေတွေက ညဘက်ပြန်လာပြီး သူ့ကလေးတွေကို နှုတ်ဆက်ရုံ၊ ညစာ စားပြီးပြီလားမေးပြီးရုံနဲ့ အိပ်ယာထဲ တန်းဝင်ရတာတွေကို ကိုယ့်လူမျိုးက မခံစားဘူးတော့ ဘယ်ဒီလောက်တွေးထားမိမလဲ။ သူ့အလုပ်က အိမ်ရှင်းရုံ၊ ထမင်းချက်ပေးရုံလေးပဲ ထင်မှာပဲပေါ့။ ဒါတွေကပဲ အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးကို ဖြစ်လာစေတာပဲပေါ့။
ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ ဒီအလုပ်မျိုးလာလုပ်ရတဲ့ ဘ၀မျိုးတွေ ရှိကို မရှိစေချင်ပါဘူး။ အစစ အရာရာ အဆင်မပြေကြတဲ့ ဘ၀မျိုးတွေမှာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေအရ မတတ်သာလို့ လာကြရပြီဆိုရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ နှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အများကြီး ပြင်ဆင်လာဘို့ လိုတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြချင်တာပါပဲ။ မိဘကို ပြောခဲ့တဲ့ အလုပ်က တစ်မျိုး၊ ဒီမှာ လုပ်ရတော့ တစ်မျိုးနဲ့ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ သာဓကတွေလည်း အများကြီး ရှိတာမို့ သေသေချာချာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူရှိတယ်၊ ဘယ်ဝါရှိတယ် ဆိုတဲ့ အားကိုးချင်တဲ့ စိတ်တွေလဲ ဖျောက်ခဲ့ဘို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ရင် အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူတော်တော် ရှားပါတယ်။ သေသေချာချာ Plan ချပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်၊ ဘယ်လိုမှ မမှားနိုင်ဘူး၊ အဘက်ဘက်က ဟာကွက်မရှိဘူးဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ရင်တောင် ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်လုံးဝ ထင်မထားတဲ့ နေရာကနေ အရှိုက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးနှက်တတ်တာမျိုး မဟုတ်လား။ ။
ရုံးဆင်းချိန် ရထားပေါ်မှာ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ကုလား (သို့) ကုလားမ တစ်ယောက်ယောက်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် စီးဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်ပြီးစီးရတဲ့ ရထားကြပ်ကြပ်ပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ကုလား လက်မြောက်လိုက်တာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ အကယ်၍ မကြုံဘူးဖူးဆိုလျှင် သင်သည် အလွန်ကံကောင်းသူဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
လူ (၈၀) ကျော်ရှိသော မိမိလုပ်ငန်းခွင်တွင် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ကုလားမ ၅ ယောက်သာရှိသည်။ အများစုမှာ မလေးရှားမများနှင့် တရုတ်မများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ထို ၅ ယောက်သော ကုလားမတို့သည် ဘုရားစူး ကုလားမ ဟုဆိုရမည်ပင်။ ကုလားစော်နံသော ကုလားမ များမဟုတ်ကြ။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေတတ်သော၊ မဆလာနှင့် နွားနို့ညှီနံ့ထွက်နေမတတ်သော ကုလားမများ ဖြစ်လေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က သူတို့ကုလားမ ဆိုတာကို မေ့လျော့နေစေတတ်သော ကုလားမများဖြစ်ကြသည်။ ဘာဘာနီ ရောက်မလာခင် အထိဆိုပါတော့လေ။
ဘာဘာနီဆိုသည့် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်၊ ကုလားမ ၀၊ ၀ လေးရောက်လာပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာတွင် အားလုံးပွစိပွစိ ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ ထမင်းစားချိန် ပြောကြသော စကားဝိုင်းများတွင် ဘာဘာနီ က အဓိက အကြောင်းအရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စားပွဲခြင်းကပ်ရက် ထိုင်ရသော တရုတ်မလေးခမျာ ရူဆေးဗူး အမြဲရူနေရသော အဆင့်သို့ရောက်နေချေပြီ။ သူမခမျာ ရုံးလာရမှာကို ကြောက်နေရှာလေပြီ။
ထိုသတင်းသည် ရှိနှင့်ပြီးသော ၅ ယောက်သော ကုလားမများထံ တမဟုတ်ချင်း ကူးစက်သွားလေသည်။ ကုလားမများ ခေါင်းခဲကြလေပြီ။ "ကုလားတွေက အရမ်းနံတာပဲ" ဆိုသောစကားသည် သူတို့ထိန်းသိမ်းခဲ့သောဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးနေချေပြီ။ ဘာဘာနီ စီမံချက်ကို အမြန်ရေးဆွဲကြလေသည်။ ပထမဆုံးတာဝန်ယူလိုက်သည်က ကာရိုလိုင်း ဆိုသည့် ကလေးသုံးယောက် အမေ ကုလားမ။ သူမအတွေးက "မိန်းမအချင်းချင်းပဲ၊ ရင်းနှီးသွားရင် သတိပေးလိုက်ရုံပေါ့" ဘာဘာနီ ပြဿနာသည် သူမအတွက် သေးသေးမွှားမွှားပင်။
စီမံချက်အရ ကာရိုလိုင်းသည် ဘာဘာနီ နှင့် ရင်းနှီးအောင် အရင်ပေါင်းရသည်။ သူမသည် အလွန်စိတ်သဘောထားပြည့်ဝသော ကုလားမ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အလွန် အသန့်အပြန့်ကြိုက်သည်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်း အမြဲးဆိုးထားပြီး ဆံပင်ကိုလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ချည်နှောင်ထားသည်။ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို အရမ်းဂရုစိုက်သောသူဖြစ်သည်။ ကာရိုလိုင်းသည် နေ့လည်ထမင်းစားချိန်တွင် ဘာဘာနီ နှင့် အတူတူစားရသည်။ လက်သည်းရှည်ရှည်၊ ဂျီးအပြည့်နှင့် ဒံပေါက်ထမင်းစားနေသော ဘာဘာနီကို သူမတော်တော် စိတ်ညစ်နေပုံရသည်။ သို့သော် ကာရိုလိုင်းသည် အလွန် စိတ်ရှည်သောသူ ဖြစ်သည်။ "ဇွန်းနဲ့ စားပါလား။ ဆာရီပေါ်ကို ကြက်သားဟင်း အနှစ်တွေ ကျကုန်ဦးမယ်။" လို့ ချိုချိုသာသာ ပြောရှာသည်။ ဘာဘာနီ က မရိပ်မိ။ ဒံပေါက်ကို လက်နဲ့ ပဲ စားတတ်တယ် ဟု ပြန်ပြောသည်။ ကာရိုလိုင်း လည်း ငြိမ်နေလိုက်ရသည်။ ထင်သလောက် မလွယ်ဟု သက်ပြင်းခိုးချသည်။ ဘာဘာနီ ကား ဆပ်ပြာမတိုက်ဘဲ လက်ကို ရေနှင့် ပွတ်ကာ ထွက်သွားလေသည်။
တစ်လခန့်ကြာသော် ကာရိုလိုင်းက သူမတွေ့ရှိသော အဖြေကို တင်ပြလာသည်။ "ဘာဘာနီ ၏ ကုလားမ၀တ်စုံများသည် သူမအနားကို ဘယ်သူမှ မကပ်နိုင်သော တရားခံများ ဖြစ်သည်" တဲ့။ ချွေးမစုတ်နိုင်သော နိုင်လွန်လဲမဟုတ်၊ ဖော့ရှန်လိုလို ဘာလိုလို အ၀တ်စများကြောင့်ဟု စွပ်စွဲသည်။ ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ဘာဘာနီ ၏ ဌာနမှ အကြီးအကဲ ကုလားမက တာဝန်ယူလိုက်သည်။ သူမနာမည် က ဂျာရန်သီ။
ဂျာရန်သီကား ပိန်ပိန်သေးသေးလေးနဲ့ အရမ်းသွက်သော ကုလားမဖြစ်သည်။ အသက် ၄၀ ဟု မထင်ရအောင် နုပျိုသည်။ စကားပြောလျှင်လည်း နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းသည်။ အားလုံးက သူမကို ခင်မင်ကြသည်။ ဘာဘာနီ ကလဲ သူမကို ခင်လေသည်။ ဂျာရန်သီက သူ့လက်အောက်ဝန်ထမ်း အားလုံးကို တနင်္လာနေ့ကနေ ကြာသပတေးနေ့အထိ ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ရမည်။ သောကြာနေ့တရက်သာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ လွတ်လပ်ပေ့ါပါးသော အ၀တ်အစား ၀တ်ရမည်ဟု "ကုလားမများအတွက်သာ" ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သော တစ်ခါမှ မကြားဘူးသည့် အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုနေ့က ဘာဘာနီ အလွန်စိတ်တိုနေလေသည်။ သူမမှာ မရှိသော ၀တ်စုံကို ၀တ်ခိုင်းရပါမည်လားဟု တော်တော်ခင်သော ဂျာရန်သီ ကို ဒေါသထွက်ပြီး အမိန့်အရ ရှော့ပင်း လုပ်ရန်ဟု အကြောင်းပြကာ စောစောပြန်သွားလေသည်။
ဘာဘာနီ ၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို မျက်စိထဲမြင်နိုင်ရန် အနည်းငယ် ပြောပြချင်သေးသည်။ အလွန်ဝသော ကိုယ်ခန္ဓာ အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ပေါင် ၂၅၀ လောက် အသာလေးရှိသည်။ ဘယ်သူမှ ဘယ်နှစ် ပေါင် ရှိလဲဟု အသေအချာ မမေးရဲ။ အလွန်ပါး၍ ဦးရေကို မြင်နေရသော ဆံပင်ကို အမြဲ အပြောင်သိမ်း ချည်ထားသည်။ မနက်စာအတွက် ပေါက်စီ ၄ လုံး (သို့မဟုတ်) Curry Puff ၄ ခု နှင့် မိုင်လို သံဗူး ၃ ဗူး စားသောက်သည်။ အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံ လုံးဝမစား။ မျက်နှာက အမြဲတမ်း စူပုပ်နေပြီး အပေါ်အောက် ၂ ခါလောက် လှေကား ၁၀ ထစ်လောက် တက်၊ ဆင်းပြီးလျှင် "အရမ်းပင်ပန်းတာပဲ" ဟု ပြောပြီး ၁ နာရီလောက် ထိုင်နေတတ်သည်။ နဲနဲလေး လှုပ်လိုက်လျှင် ချွေးအရမ်းထွက်တတ်ပြီး မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ပြန်းထန်သော အနံ့အသက်မျိုးရှိသည်။ သူမထိုင်သွားသောနေရာတွင် နောက်တစ်ယောက်ထိုင်ဘို့ ၅ မိနစ်လောက် လေသလပ်ခံထားမှ ထိုင်နိုင်သည်။ သူမအခန်းထဲ ၀င်လာလျှင် မော့ကြည့်စရာမလို။ အားလုံးသိစေရမည်။ ဘာဘာနီ ၀င်လာပြီဟု။ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် အသက် ၆၀ ကျော်တို့ တပ်လေ့ရှိသော ကော်ကိုင်း မျက်မှန်ဝိုင်းဝိုင်းကြီး တပ်ထားလေ့ရှိသည်။ မည်သူမဆို အသက် ၃၅ နှစ်လောက်ရှိပြီး အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်မည် ဟု ခန့်မှန်းမိကြလေသည်။
နောက်နေ့တော့ ရှပ်အင်္ကျီအနက်၊ ဘောင်းဘီအနက်နှင့် ဘာဘာနီ ရောက်လာချေသည်။ "လှနေလိုက်တာ" ဟု ကုလားမတသိုက်က ၀ိုင်းပြီး ချီးကျူးကြသည်။ စီမံချက်အရပေါ့လေ။ ဘာဘာနီ လည်း မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာလေး တော်တော်လျော့သွားသည် ဟုထင်ရသည်။ အင်္ကျီအသစ်၊ ဘောင်းဘီအသစ်နှင့် ထိုနေ့က ဘာဘာနီ ပြုံးနေလေသည်။
သို့သော် ပြဿနာက ပိုကြီးထွားလာသည်။ ၀ယ်လဲဝယ်တတ်ပါတဲ့ ဘာဘာနီ။ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီအားလုံး က အလတ်စတစ်ပါတဲ့ အသားမှာ ကပ်နေတတ်တဲ့ အစမျိုးတွေ ချည်းပဲ။ ကုလားမ၀တ်စုံထက် အနံ့ပိုပြင်းလာတဲ့အပြင် ပေါင် ၂၅၀ ကိုယ်လုံးဖြင့် တကိုယ်လုံး ကျပ်ထုတ်နေကာ အနံ့ အာရုံအပြင် အမြင်အာရုံကို ပါ ထိခိုက်လာချေပြီ။ ကာရိုလိုင်းက အဆိုးဆုံး ခံစားရသူဖြစ်သည်။ သူမ တိုက်ရိုက်ပြောတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဘာဘာနီ စိတ်ကြည်နေသည့် တနေ့ ရေချိုးပြီးရုံးလာဘို့၊ လက်သည်း ခြေသည်း ညှပ်ဘို့၊ အ၀တ်အစားကို ချည်သားလေးတွေရွေးဝတ်ဘို့၊ ရေမွှေး၊ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးတွေ သုံးဘို့ အမုန်းခံပြီး ပြောပြလိုက်သည်။ နားထောင်ပြီး ဘာဘာနီ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် ပြောသည်က "နင့် အပူမပါ ပါဘူး" ဟူ၏။ သို့ဖြင့် လက်လျှော့ရတော့မလိုလို ဖြစ်နေပြန်သည်။ သူတို့ ခြင်္သေ့ကျွန်းက ဘာသာစကားနဲ့ ပြောကြသည်။ "We all give up already" တဲ့။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘာဘာနီ နှင့် ဆိုက်တူ၊ ဂိုက်တူ ကုလားမ တစ်ယောက်ရှိသေသည်။ သူမသည် အလွန်ပျော်တတ်သည်။ အမြဲ ရယ်နေရပြီး တရုံးလုံးနှင့် ခင်မင်သူဖြစ်သည်။ ကာရိုလိုင်းက သူတုိ့ရဲ့ မအောင်မြင်သော စီမံချက်ကို ပြောပြသည်။ ဘာဘာနီ ၏ လက်မခံနိုင်သော၊ ခေါင်းမာသော အကျင့်စရိုက်ကိုလည်း နားလည်းအောင်ပြောပြသည်။ ထိုအမျိုးသမီးက နားထောင်ပြီး ပြဿနာက သေးသေးလေးပါ။ အဓိက က "၀ သောသူကို ကြင်နာပါ" ဟု ဆိုသည်။ ၀ သောသူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကြရမည်လေ။
သို့နှင့် ဘာဘာနီကို တွေ့လျှင် ဒီနေ့လှတယ်၊ ဒီနေ့ အင်္ကျီက အသစ်လား။ အရောင်လေး လှတယ်။ နည်းနည်းလင်းတဲ့ အရောင်လေးတွေ ၀တ်ပါလား။ မနက် ရုံးလာရင် တက်စီ မစီးဘဲ လမ်းလျှောက်၊ ဘတ်စ်ကားစီးပါလား။ စသည်ဖြင့် နေ့တိုင်း သွား၊သွား ပြောပေးခဲ့သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ခင်မင်မှု အတိုင်းအတာ မြင့်မားလာသည်နှင့် အမျှ ဘာဘာနီ လည်း ပြောင်းလဲလာသည်။ အရမ်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး၊ အော်ဂလီဆန်လောက်အောင် မရှိတော့။ ကုလားမ အုပ်စုလည်း သက်ပြင်း ချနိုင်လာကြသည်။
ဘာဘာနီ ကိုယ်တိုင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ ရိုက်ခတ်မှုများကို သတိထားမိစ ပြုလာဟန်ရှိသည်။ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကိုတော့ ဂရုစိုက်လာသည်။ အရင်တုန်းကလို ရူဆေးဗူး ရူနေရသော အဆင့်ထက်တော့ ကျော်လွန်လာသည်။ ကုလားရေမွှေးနံ့လေးတော့ သင်းလာသည်။ ချွေးနံ့ထက်တော့ တော်ပါသေးသည်။ သို့သော် ဘာဘာနီ ၏ တိုးတက်မှုကို စင်္ကာပူ တရုတ်မများကတော့ အသိအမှတ် မပြုကြသေးချေ။ ဝေးဝေးကသာ ဆက်ဆံ ပြောဆို နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တော့ အလုပ်ထဲမှာ "မိမိဘ၀မှာ စိတ်အကျေနပ်ဆုံး အရာ" ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဌာနတစ်ခုကို တစ်ယောက် Presentation လုပ်ရသည်။ တချို့သော အမျိုးသမီးများက သူတို့ သားသမီးလေးတွေ အကြောင်း ပြောသည်။ တချို့က သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အလှပဆုံး အရာကို ညွှန်းသည်။ တချို့က သူတို့ရဲ့ လက်ရှိ အလုပ်သည် သူ့ဘ၀အတွက် စိတ်ကျေနပ် ပျော်ရွှင် ဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး ဟုဖွင့်ဆိုကြသည်။ ဘာဘာနီ အလှည့်ရောက်သောအခါ "သူမ၏ ရုပ်ဆိုးသော ရုပ်ရည်၊ အလွန်ဝသော ခန္ဓာကိုယ်" သည် သူမ၏ ဘ၀မှာ ရှိရှိသမျှသော အရာအားလုံးထက် ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည် ဟု ပြောလိုက်သောအခါ အားလုံး အံ့သြပြီး ဘာဘာနီ ကို ပြူးကြည့်ကြသည်။ သူမက ရှင်းပြသည်မှာ သူမ၏ ဖခင်သည် ဦးနှောက်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် ဘာမှ ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်သလို၊ သူမ၏ မိခင်မှာလည်း ကျောရိုးမကြီးရှိ အဆစ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ပင်ပင်ပန်းပန်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်။ ထိုအဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် လှပ၍ အိမ်ထောင်စောစောကျသွားသော ဘာဘာနီ၏ အစ်မနှင့် ညီမများက အမြဲတမ်း တာဝန်မယူနိုင်။ ရုပ်ဆိုး၍ မည်သူမျှ လာရောက် တောင်းရမ်းခြင်း မရှိသော ဘာဘာနီ ကသာ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်နိုင်သည်။ ဘာဘာနီသည် ရသမျှ လခအကုန် သုံး၍ မိဘကို အိမ်ဝယ်ပေးထားသည်။ စားချင်တာ ကျွေးသည်တဲ့။ ဆေးခန်း သွားလည်း ဘာဘာနီ၊ လူမှုရေးလည်း ဘာဘာနီ သူမတို့အိမ်မှာ သူမတစ်ယောက်တည်းသာ အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်နေသည်တဲ့။ သူ့အတွက်၊ သူ့ကိုယ်တိုင်အတွက် ရုံးတက်ဘို့ အင်္ကျီ၅ ထည်က လွဲလျှင် ဘာမှမရှိတဲ့။ ထို့အပြင် အလှပြင်စရာမလိုသော မိမိရုပ်ရည်၊ ပေါ်သမျှ၊ ဆန်းသမျှ ၀ယ်ဝတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သော မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်၊ ထိုထိုသော ပိုက်ဆံကုန်စရာအားလုံးသည် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သော မိဘနှစ်ပါးစလုံးအတွက် ဖြစ်စေသောကြောင့် သူမဘ၀၏ အကျေနပ်ဆုံးအရာသည် သူမ၏ အရုပ်ဆိုးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်ဟု ဘာဘာနီ က နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
လက်ခုပ်သံများ ခန်းလုံးပြည့် ဆူညံသွားသည်။ ရှောင်ဖယ်ဖယ် လုပ်ခဲ့သော တရုတ်မလေးများ ပြုံးပြီး လက်မလေးတွေ ထောင်ပြကြသည်။ ထိုနေ့က ဘာဘာနီ အလှဆုံး ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ။
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://seenbseen.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.